5 qaab oo ugu fiican siigada | shumis.net
Home » galmada » 5 qaab oo ugu fiican siigada
Dhalinyar badan ayaa ku mashquulsan seegada, runtii waa cudur ku dhacay bulshada lagu magacaabo doob rag iyo dumarba.
Waan ka soo hadalnay dumarka sida ay u seegaystaan halkaan ka akhriso siigada naagaha hadda waxaan ka hadlaynaa barbaarta, marka hore ragga waxaa ku xambaaro siigada kacsiga, kaasna wuxuu ka dhashaa marka uu ninka naag qaawan arko, ama naag taabto, ama ninka biyaha jirkiisa ku bataan, ama gabar la sheekaysto, arintaas waxay keenaysaa inuu dareenkiisa kaco marka siigada sameeyo.
Nimanka maxay ku seegaystaan? runtii dhaliyarada badankooda waxay adeegsadaan saabuun marka ay musqusha galaan ayayna siigaystaan, kuwo waxaa jira ku siigaysto saliidda, soomaalidii hore waxay adeegsan jireen geedka gobka caleentiisa la calaanjiyay, waxaa ka sii yaab badan dadkii hore waxay sameen jireen wax lala yaabo.
Ninka rabo inuu siigaysto wuxuu aadi jiray suuqa wuxuu soo gadayaa cad hilib weyn oo aan laf lahayn (hilib jiir) guriga ayuu keensanayaa markaas ayuu mindi soo qaadanayaa kaddib ayuu dhanbalayaa, sida cambarka oo kale u bujinayaa, markaas ayuu geedkiisa gelinayaa, sidaas ayuu ku biya baxayaa, culimo badan waxay
dhaheen ninka falkan samaynaya labo shay qalad ah ayuu isku darsaday.
1-falka koobaad seego
2-falka labaadna cunto ayuu ku cayaaray oo ay jiraan dad masaakiin u baahan inay cunaan.
Hadda seegada waxay isu baddashay qaab waxaas oo dhan ka xun, inta wiilka internetka soo galo sida Skype ama Paltalk ama Viber ama Whatsup markaas ayuu la siigaysanayaa gabadha, wuxuu leeyahay i tus naaska iyo badada, waxaa laga yaabaa inay duubaan oo Youtbeka soo geliyaan, ninyahow ka fogow seegada haddii aad rabto inaad ilaaliso ragnimadaada.
Dadka badankooda xaasaskooda wax ka tari la’ markii hore ayay seego isku soo dileen, hadabda dhibaatooyinka ay siigada leedahay aad bay u badan yihiin.
Title: 5 qaab oo ugu fiican siigada
Posted by Unknown, Published at July 22, 2016 and have 0 comments